လွပ်လပ်ရေးလော ? ပြည်ထောင်စုရေးလော? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » လွပ်လပ်ရေးလော ? ပြည်ထောင်စုရေးလော?
လွပ်လပ်ရေးလော ? ပြည်ထောင်စုရေးလော?
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Feb 24, 2017 in Think Different |6comments
ဒုတိယအကြိမ် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကြီးအစပြုနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အသီးသီးပြင်ဆင်နေကြလေပြီ။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ရုံး၏ ရက်တစ်ရာစီမံချက်မှစတင်ခဲ့သော
မြန်မာလူထုအစိုးရဟု ခေါ်တွင်းနိုင်သော NLD အစိုးရ လက်ထက်၏ ကြိုးစားပမ်းစား ဖေါ်ဆောင်လျက်ရှိသော
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် ဗမာလူမျိုးစုကြီးနှင့် တောင်တန်း
ဒေသတိုင်းရင်းသားတို့၏ အပေးအယူ မျှတနိုင်ပါမည်လောဟု.. ။
ဗမာလူမျိုးစု အာဏာ ပိုင်များကရော ဘာပြန်ပေးနိုင်မလဲ?
ဤသည်မှာ မရိုးနိုင်သော စိတ်ကူးယဉ်မေးခွန်းများသာ..။
အယူနဲ့အပေး၏ အလယ်၌ စာချုပ်ကြီးကိုချလျှက် မေးခွန်းတွေ
ထုတ်ကြပါလိမ့်မည်။ တောင်တန်းဒေသ လူမျိုးစုများက စာချုပ်
ကြီးကိုတွင်တွင်ကြီး လက်ညိုးထိုးလျက် ဗမာလူမျိုးများ၏
ကတိသိက္ခာကို မှတ်ကျောက်တင်လို ကြောင်း အနက်ကို
ဗမာလူမျိုးစုကြီ ၏ အာဏာ ပိုင်များက အမျိုးမျိုးသော အဓိပ္ပါယ်
လူမျိုးစုများက လွပ်လပ်ရေးဟု သတ်မှတ်ကြမည်လော???
အာဏာ တစ်စပ်တပိုင်းဖဲ့ပေးခြင်းသာလျှင် ပြည်ထောင်စုကြီး
ပင်လုံကို နားလည်သလောက်တော့ တွေးတောကြကုန် စေသတည်းး…….။
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် စပ်ဖများအားလုံးတို့အပြင် ရှမ်းပြည် နယ်များ၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသများနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့ တက်ရောက်ကြသော ပင်လုံမြို့တွင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးကြီးတရပ်တွင် …
အင်္ဂလိပ်က သိမ်းတယ်..။ သိမ်းတယ်..။ မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းတယ်..။
သူသိမ်းတာလောက်တောင် ပြန်မပေးဘူး.။ အာသံနဲ့ မဏိပူရကျန်ခဲ့တယ်..။
ဘယ်နှာ.. ပင်လုံစာချုပ်မှာတင် ရပ်နေကြသလဲမသိ..။
ပင်လုံမှာ အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ပါသင့်တယ်။
လိုအပ်တယ် ဆိုမှ ထပြောစေ။
ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေ သိပ်ကြာခဲ့တာက ဗမာအစိုးရအတွက်
အိမ်ရှင်အိမ်ငှါးတောင် ၁၀ နှစ်ကျော်ရင် နှင်မရတော့။
တဖက်ပိတ် ပိုးဟပ်ကြော်နီ ဘော့သွားတာ နိသဘောလား ဂေါ့ဒ်အလိုတော်လား
ဘလာဇီယာကောင်းမှ ဖစ်မေ သလား!!